Xaglatoosiye oo u hanjabay Feysal Waraabe “Daarood haduu caayo hala caayo Ciidagale”. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaXaglatoosiye oo u hanjabay Feysal Waraabe “Daarood haduu caayo hala caayo Ciidagale”.
July 28, 2019 marqaan Faalloyinka, Puntland, Somaliland, Soomaliya, Wararka maanta 3
Mar kale Xaglatoosiye ayaa yidhi “Maxamuud Saleebaan Puntland Waa la yaqaan Inay Dad wanaagsan oo Dalkooda Jooga yihiin ee Faysal Hadalkiisa Ha Miisaamo Ileen Ciidagale Waa la Caayi Karaa e
Wasiir Xaglo ayaa Markale Yidhi Faysal Wuxuu u Baahan Yahay Siminaar
Xaglo Waa Nin Hadalka Heli Og oo Aan ka Gaban Marka uu Rabo inuu Meel weeraro.
Waa la wada ogyahay in uu faysal Cali Waraabe hadlo xun yahay.Hase ahaatee cayda faysal lahan ma leh ama ma aha in la sii raad raaco.Isla markaas beesha Faysal masuul kama aha aflagaadooyinka Faysal ee uu hawada ku baahiyo.Faysal waa sii socdaa ee haloo dulqaato maalmaha u haray.
Sadaq Noor says:
Xaglatoosiye waa qaldan yahey waayo. (Beesha Darood wean) iyo waxuu isla simey (jifi ciidagale) ka mid ah beesha Isaac ka ah 0.3% xagla toosiyoow hadaalkaaga waa qasaaro maskaxdaaduna maleh miisaan !!!!!!!
Xagla toosiyoow waxaa dhex Joogta waa beesha Isaac EE hargeyso hareyso waxaad katahey naafo madaxa looga jiro!!!!!!!!!
Feysal cali gaarsiiya haduu yimaado Uk Sweden Finland Norge iyo Eu of dhan malagiisa Ayala galaya isaga iyo hooyadiis!!!!!